पार्टनरलाई यौन सन्तुष्टी दिन सक्नु भएन ? यसरी गर्नुहोस सेक्स… | Rajmarga
काठमाडौं । यौन सम्बन्धमा मधुरता छ भने दुवैको सम्बन्धमा नयाँ उर्जाको पनि सञ्चार हुन्छ तर, यदि यौनसम्बन्ध नै बोझिलो भैसकेको छ भने सम्बन्ध पनि बोझिलो हुन सक्छ ।
स्वभाविकै हो युवाहरुले हरेक काम छिटो गर्न चाहन्छन् । युवा उर्जा र जोशको विशेषता नै तातो रगत हो । उनीहरुलाई उत्साहले भरिएका हुन्छन र हरेक काम आँफै गर्न तत्पर रहन्छन् । युवा पिँढीले हरेक कुरा सिक्न अनुभव गर्न चाहन्छ । आफूलाई मनलागेको कुरा खुलेर गर्न चाहने युवाहरुको स्वभावै हो । प्रेम पनि युवाले खुलेर गर्छन् ।
एकअर्काको शरीरसँग केहीबेर चल्नुहोस
तपाईंलाई यौनको केही अलग अनुभुती भैरहेको महसुस हुन्छ र रोमाञ्चक अनुभव पनि मिल्नेछ । पार्टनरसँग एक रोमान्टिक कहानी बनाएर आ–आफ्नो रोल बाँड्नुहोस् । बेडरुममा त्यो रोल निभाउँदा तपाईले एक नयाँ अनुभूती प्राप्त गर्नुहुन्छ ।
जब तपाईं तनावमुक्त हुनुहुन्छ तबमात्रै आफ्नो यौनसाथीको चाहना बुझ्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुलाई यौनको पुरा आनन्द दिन सक्नुहुन्छ । तर जब एक साथी असन्तुष्ट हुन्छ त्यतिखेर यौनको आनन्द एकतर्फी र अधुरो हुन्छ । त्यसैको रिसले त्यो सम्बन्धलाई बिगार्न पनि सक्छ । एजेन्सि
Previous post: वैदेशिक रोजगारीबाट अभिशप्त छ रुमको बेली गाउँ
Next post: लुगा छोटो भो कि नियत खोटो ? बलात्कारको विरोध गर्दै रञ्जु दर्शना पनि सडकमा